အံ့တောငျ ..သွ သှားဦးမယျ | မာသငျ
အံ့တောငျ ..သွ သှားဦးမယျ
လုပျငနျးတျောတျောမြားမြားက ပွိုငျဘကျရဲ့အားသာခကျြတှကေိုပဲတှေးပွီး ပုံကွီးခြဲ့ စိုးရိမျစိတျပူနကွေရငျး…..
ကိုယျ့ရဲ့အားသာခကျြ တှကေို ပုံဖျောဖို့မနေ့တေတျကွတယျ။
ပွီးရငျ . … ပေါငျးစပျပွီး …. ပုံကွီးခြဲ့ပဈလိုကျစမျးပါ။
ကိုယျဘယျလောကျ….. တျောတယျဆိုတာ …
အံ့တောငျ ..သွ သှားဦးမယျ ဗြာ..တို့.။ ။
အံ့တောင် ..သြ သွားဦးမယ်
လုပ်ငန်းတော်တော်များများက ပြိုင်ဘက်ရဲ့ အားသာချက်တွေကိုပဲတွေးပြီး ပုံကြီးချဲ့ စိုးရိမ်စိတ်ပူနေကြရင်း…..
ကိုယ့်ရဲ့ အားသာချက် တွေကို ပုံဖော်ဖို့ မေ့နေတတ်ကြတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ အားသာချက်ငယ်လေးတွေကို ပုံဖော်ပါ။
ပြီးရင် . … ပေါင်းစပ်ပြီး …. ပုံကြီးချဲ့ ပစ်လိုက်စမ်းပါ။
ကိုယ်ဘယ်လောက်….. တော်တယ်ဆိုတာ …
အံ့တောင် ..သြ သွားဦးမယ် ဗျာ..တို့ .။ ။